साताको पहिलो दिन डलरको भाउ कति छ ? अन्य देशका मुद्रादरसहित - केन्द्र खबर
साताको पहिलो दिन डलरको भाउ कति छ ? अन्य देशका मुद्रादरसहित
२०७९ जेष्ठ २२ ०९:४४
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार साताको पहिलो दिन आज आइतबार अमेरिकी एक डलरको खरिद दर १२३ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्री दर १२४ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ। यस्तै युरो एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ७५ पैसा कायम रहेको छ ।
बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १५५ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्री दर १५६ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ। अष्ट्रेलियन डलरको बिक्रीदर ८९.८५ रुपैयाँ र खरिददर ९०.२८ रुपैयाँ छ भने सिंगापुर डलरको बिक्रीदर ९०.२२ रुपैयाँ र खरिददर ९०.६६ रुपैयाँ छ ।
१० जापानी येनको बिक्रीदर ९.५२ रुपैयाँ र खरिददर ९.५७ रुपैयाँ छ भने चिनियाँ युवानको बिक्रीदर १८.६० रुपैयाँ र खरिददर १८.६९ रुपैयाँ छ । यस्तै, साउदी रियालको बिक्रीदर ३३.०३ रुपैयाँ र खरिददर ३३.१९ रुपैयाँ कायम छ ।
कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३३ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्री दर ३४ रुपैयाँ ०९ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।